Roobab ka da’ay Muqdisho oo Saameyn ku reebay Barakacayaasha ku dhaqan – SBC
Roobab ka da’ay Muqdisho oo Saameyn ku reebay Barakacayaasha ku dhaqan
Muqdisho- Dadka barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha iyo hareeraha magaalada Muqdisho ayaa soo saaray cabashooyin xoogan oo ku aadan xiliga lagu jiro iyo roobab 24kii saac ee la soo dhaafay ka da’ayay magaalada Muqdisho .
Waxay sheegeen dadkani in roobabkaasi ay u geysteen khasaarooyin badan oo ay ka midtahay guryihii cooshadaha ka sameysnaa ee ay degenaayeen oo ka qoyay, Dhaxan iyo biyihii uu dhigay oy ku dhexjiraan .
Intaas waxay ku dareen in ay ka cabsi qabaan cuduro ka dhasha oo saameyn ku yeesha dadka halkaasi ku dhaqan siiba caruurta yar yar.
Waxay ka codsadeen cid alaale cidii wax u qaban karta in ay la soo gaaraan gar gaar deg deg ah, iyagoona diirada saaray in iminka ay u baahan yihiin waxyaalo ay kaga gabadaan dhaxanta dhaceysa maadaama lagu jiro xili roobaad.
Sikastaba ha ahaatee 2dii maalin ee ugu dambeysay Muqdisho waxaa ka da’ayay Roobab Mahiiraan ah oo siweyn loogu diirsaday islamarkaana biyo dhigay wadooyinka waaweyn ee Magaaladaas.